Dowlada Norway oo rabta in la kordhiyo lacagta ay bixiyaan dadka qoysaskooda u dacwoonaya. - NorSom News
Dowlada Norway oo rabta in la kordhiyo lacagta ay bixiyaan dadka qoysaskooda u dacwoonaya.
Dowlada Norway ayaa sheegtay in laga bilaabo sanadka cusub, ay rabto in la kordhiyo lacagta laga qaado dadka raba inay qoysaskooda u dacwoodaan ee ka weyn da´da 18-ka sano. Lacagtaas ayaa hada ah 8000 NOK, waxeyna dowladu rabtaa in laga dhigo 10.500 NOK.
Lacagta laga qaado dadka raba inay qoyskooda u dacwoodaan ayaa sadex jibaar kor u kacday sadex sano gudahood oo ay xukunka heysay Erna Solberg. Dowlada aya sheegtay in ujeedka kordhinta lacagtan ay tahay in qofka dacwoonayo uu bixiyo dhamaan lacagta ku baxeyso howshan iyo prosseskeeda.
Xisbiga FRP oo kamid ah xukuumada Erna Solberg ee hada talada heysa ayaa aaminsan in wali siyaasada soo galootiga Norway ay u baahantahay adkeyn, iyaga oo sheegay in meelaha in wax laga qabto u baahan ay kamid tahay isku imaanshaha qoysaska.
Previous articleDødstallet etter terrorangrepet i Mogadishu stiger til 358
Next articleDaawo: Isbadal intee le´eg ayaa ku yimid Af soomaaliga sanadihii ugu danbeeyay.